Onye na-agbanwe agbanwe
10 kw ngwakọ atọ usoro inverter
Ihe njiri mara: ■ Gbanye / gbanyụọ ọkụ grid oge <10ms Ikike dị iche iche <3.3kw Jikọọ 100% ibu na-enweghị isi na mgbanyụ ọkụ Wide batrị dị gburugburu 200V-800v Dabere IP65 nchebe, dị mma maka ọnọdụ ọjọọ dị ka ịdị elu, elu okpomọkụ, elu dị elu. oyi, na ogologo ọrụ na-aga n'ihu ma nwee ntụkwasị obi. Ndụ a haziri ahazi dị ka afọ 25. ■ Kwadoro njikọta nke na-enweghị oghere na ọdụdụ na-enweghị oghere; Site na ọrụ nke njikwa ike, kwado operatio na-enweghị nchịkwa ...
5kw-ngwakọ-inverter-Single Phase-Data mpempe akwụkwọ
Ihe omuma: ■ On / grid swith time <10ms; Ikike ichebara ihe <1.2kw; Ikike dị mfe <25kg maka nrụnye nrụnye; ■ IP65 larịị nchedo, dị mma maka ọnọdụ ọjọọ dịka oke, mmiri dị elu, oke oyi, yana ọrụ ogologo oge na-aga n'ihu na ntụkwasị obi. Ndụ a haziri ahazi dị ka afọ 25. ■ Kwadoro ịgbanye ọkpọkọ na ikuku na - anaghị akwụsị akwụsị; Site na ọrụ nke njikwa ike, kwado ọrụ nchịkwa na-enweghị nchịkwa na-enweghị EMS. Na flexib ...
Adreesị: 160lọ 1601, Iwu Alọ A, Tianning Times Square, District Tianning, Changzhou City, Jiangsu Province
Ekwentị: 0086- 15151928996
Ekwentị mkpanaaka: 0086-18350072656
© nwebisiinka - 2010-2022: Edebere ikikere nile. Ndụmọdụ , Ngwaahịa dị ọkụ , Sitemap , AMP Mobile
Off-Grid Inverter, On-Grid Inverter, On Off Grid Hybrid Inverter, Fortuner Hybrid Inverter, Darfon H5001 Hybrid Inverter, Systeme Solaire,